Maka (any Arabia Saodita) - Wikipedia
I Maka dia tanàna any amin' ny tapany andrefan' i Arabia Saodita, miorina 80 km miala ny Ranomasina Mena, renivohitry ny faritanin' i Maka. Amin' ny teny arabo izy dia atao hoe مكة / Makka. Ny Malagasy sasany dia manonona hoe Lameka na Lameky (manakatra ny fanononana frantsay hoe La Mecque).
Ny Kaaba ao Maka jerena amin'ny hariva, ao aoriany ny Moskea Lehibe.
Araka ny lovantsofina silamo dia tao no nahaterahan' ny mpaminany Mohamady tamin' ny faramparan' ny taonjato faha-6, ao no misy ny moskea Masjid al-Haram ("Moskea Masina") izay misy ny Kaaba (arabo: الكعبة / al-Ka'ba). Ny lovantsofina silamo dia milaza ihany koa fa tamin' ny andron' i Ibrahima (Abrahama) no nanorenana ny tanàna, ka tanàna masina indrindra i Maka noho izany. Tsy azon' ny lehilahy tsy miozolmàna sy ny vehivavy (na dia silamo) idirana ny ao.
Tsy tena mazava ny tantara talohan' ny vanimpotoana miozolmàna momba an' i Maka. Toeram-panaovana fivahiniana masina (arabo: حَجّ / hajj) ny ao Maka, ka indraimandeha isan-taona no fanaovana izany hatramin' ny taonjato faha-7, izay mahavory vahiny an-tapitrisany avy amin' ny sampan' ny finoana silamo, avy amin' ny firenena misy Miozolmàna eran'izao tontolo izao, hatramin' ny faramparan' ny taonjato faha-20. Manandrify an' i Maka koa no itodihan' ny mpino silamo rehefa manatanteraka ny vavaka atao isan' andro.
Hatramin' ireo taona 1970 dia maro ireo mpitady vola amin'ny fanorenana trano izay manao izany asa izany ao Maka, ka manorina trano mijoalajoala sahala amin' ny any Las Vegas, mba hahafahana mandray mpino silamo maro hatrany hatrany, nefa manimba ireo toerana manan-tantara eo amin' ny finoana silamo izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Maka_(any_Arabia_Saodita)&oldid=999169"
Dernière modification le 20 Desambra 2020, à 08:28
Voaova farany tamin'ny 20 Desambra 2020 amin'ny 08:28 ity pejy ity.